Peratra Championship sy peratra kilasy manokana, mpanamboatra peratra manokana | Byer firavaka
Byer firavaka no mpanamboatra peratra fanao tsara indrindra. Tongasoa eto hitsidika ny orinasa.
Fiadiana ny tompondaka
Byer firavaka famokarana voafetra. no orinasa firavaka tsara indrindra any Shina, manokana amin'ny famokarana peratra manokana izahay. Ny vokatray dia misy ny peratra Championship manokana, peratra kilasy, peratra miaramila, peratra sonia ary peratra mekanika. Manome Serivisy firavaka manokana. Mifandraisa aminay.
Ny mpamorona matihanina antsika dia afaka manao sary 3D maimaimpoana ho fangatahan'ny mpanjifa ao anatin'ny 12 ora ary manao fanovana ara-potoana. Ny anaran'ny lalao, ny isa ary ny toerana misy azy dia misy ho antsika. Azontsika atao koa ny manamboatra vato amin'ny endrika sy loko isan-karazany.
Peratra kilasy manokana
Ianao ve mitady peratra ho an'ny tenanao na ny ekipanao Afaka manampy anao hanaiky izany izahay. Ny ekipa manam-pahaizana momba ny famolavolana dia hiara-miasa aminao hamorona sangan'asa iray. Azonao atao ny manamboatra ny anaran'ny sekoly, ny anaran'ny mpianatra ary ny taonan'ny fizarana diplaoma amin'ny peratra.
Peratra miaramila ho an'ny lehilahy
Mariky ny voninahitra sy ny zava-bitan'ny ekipanao, avia hamorona peratra tokana miaraka aminay. Azonao atao ny manana ny sary famantarana anao eo amin'ny peratra.
Peratra manokana amin'ny marika
Ahoana ny fomba hanafarana?
Raha mitady peratra ho an'ny tenanao na ekipa manokana ianao dia nasaronay anao. Ny ekipa mpamorona 3D matihanina dia hiara-miasa aminao hamorona endrika manokana ho anao.
1. Misafidiana modely iray.
2. Alefaso aminay ireo sary famantarana anao ary ampahafantaro anay hoe aiza no tianao hametrahana ireo logo.
3. Azonay atao ny manao anao endrika 3D.
4. Mandefa faktiora anao aorian'ny fanamafisana ny endrika.
5. Famokarana aorian'ny fandoavana.
6. Serivisy manokana
Niorina tamin'ny 2006, ByerJewhiasan no mpanamboatra ny famolavolana firavaka, ny famokarana ary ny fivarotana any Chine. Ny vokatra lehibe dia misy ny peratra Championship, peratra miaramila, peratra kilasy, peratra Masonia, peratra orinasa sns. Azontsika atao koa ny manamboatra vato amin'ny endrika sy loko isan-karazany.
Manana ny orinasa matihanina manokana izahay
ny orinasa mahatonga fifaninanana peratra, kilasy peratra sy ny sisa
Manana ekipa 3Ddesign matihanina izahay
ny endrika 3D afaka manome maimaim-poana ny sary ao anatin'ny 4 ora ho an'ny mpanjifa 'ny fandraisana ho mpikambana.
Manaiky customization manokana
ny vava vola aminy, dia azo namboarina mpilalao hafa anarany, No. Pos, ary ny vato manokana.
Afaka manao manokana fanovana raha diso
Ny anaran'ny mpilalao manokana, No. POS., Ny haben'ny rantsantanana, ny sokitra dia diso, azontsika atao ny manamboatra izany
Ekipa 3D Design Professional.
Niorina tamin'ny 2006, Byer Jewelry Limited no mpanamboatra ny famolavolana firavaka vita pirinty, ny famokarana ary ny varotra any Chine, ny vokatra lehibe dia misy ny peratra Championship, peratra miaramila, peratra kilasy, peratra Masonia, peratra orinasa sns. Fitaovana lehibe: 18K, 14K, 10K volamena, volafotsy, varahina, vy vy, firaka, afaka misafidy vato CZ, diamondra, vato artifisialy.
Ny ekipa mpamorona matihanina anay dia afaka mamolavola sangan'asa 3D maimaim-poana isaky ny fangatahan'ny mpanjifa mandritra ny 12 ora ary manao fanovana ho fanamafisana ny mpanjifa. Ireo mpanao asa-tanantsika mahay dia afaka manao ANARANA, Isa, POS, vato endrika manokana, enamel loko pantone sns isaky ny peratra araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Manana ekipa QA, QC matihanina ihany koa izahay ary nanao fenitra QC amin'ny antsipiriany, ny tsirairay avy amin'ny peratra dia nanamarina tsirairay avy mba hahazoana antoka kalitao alohan'ny fandefasana azy, ary hanome fahafaham-po ny mpanjifa rehetra.